Lena नदी बेसिन उत्तर-पूर्वी साइबेरिया (Yakutia र इर्कुत्स्क क्षेत्र) को विशाल क्षेत्रमा अवस्थित छ। यसको tributaries केही क्रास्नायार्स्क, खबरोभ्स्क, ट्रांस-Baikal क्षेत्र र Buryatia को गणतन्त्र मा अवस्थित छ। विश्वका सबै नदीहरूको लीना सबैभन्दा लामो overflowing गर्न 10 औं र 8th रैंकों। पानी को यो शरीर एउटै नाम अन्तर्गत बग्छ जुन रूस मा सबैभन्दा लामो नदी, मानिन्छ।
Lena नदी स्रोत पोखरी Baikal नजिकै इर्कुत्स्क Oblast (जिल्ला Baikal पहाड) मा Kachug बन्दोबस्त देखि 145 मी स्थित छ। यसबाहेक, यो Zhigalovsk, Kachugsk, Ust-Kut र Kirensk जिल्ला, एउटै क्षेत्रमा अवस्थित छन् जो मार्फत बग्छ।
Yakutia मा, लीना याकुत्स्क, Zhigansky, Kobyayskiy र Bulunsky क्षेत्रको शहरी जिल्ला मा, लीना, Khangalassky, Olekminsky, Namsky मा बग्छ। को Laptev सागर मा बग्छ, गाउँमा Chekurovka (ब्लुन्स्काइ डिस्ट्रिक्ट) बाट 160 कि। को लीना नदी को दिशा - दक्षिण बाट उत्तर-पूर्व, र त्यसपछि उत्तर याकुत्स्क देखि।
ठूलो पूर्व नदी बारेमा पहिलो जानकारी प्रारम्भिक XVII सताब्दी मा देखियो। Cossacks धेरै समूह यो unexplored क्षेत्र अन्वेषण गर्न पठाएको थियो। 1628 मा एक यात्रा Vasily Bugor र आफ्नो पार्टी भयो। उनि ANGARA अप चढेका त्यसपछि Ilim लगे, त्यहाँ जल क्रस र नदी Kut लीना आए। साइबेरिया को उत्तर-पूर्वी क्षेत्रमा वर्ष को एक जोडी पछि अफिसरले पत्रुस Beketov भयो। Ust-Kut - यसरी पहिलो घरहरू नदीको कूटा क्षेत्रमा निर्मित थिए आफ्नो सेना, नयाँ शहर स्थापना गर्न थाले।
को लीना नदी बेसिन को 1733-1743 वर्ष मा कामचट्का एक वैज्ञानिक यात्रा सदस्यहरू अध्ययन गर्न थाले। को 19 औं शताब्दीमा, क्षेत्र Chekanovsky, anjou, टोल र अन्य वैज्ञानिकहरू अन्वेषण गर्न जारी राखे। वर्ष मा लीना मा 1910-1915 cartographic काम थिए। 1919-1920 मा, यात्रा र Evgenova Mathisen को परिणाम अनुसार याकुत्स्क शहर आफ्नो मुख बाट पानी को एक सूची संकलित थियो। नाम "लीना", oddly पर्याप्त, यो रूसी महिलाको नाम जोडिएको छैन, र रूपमा अनुवाद जो Yakut "Yeh-lii-ene", देखि जस्तै "ठूलो नदी।"
Lena नदी tributaries
- युवा, कूटा, Viluy (सबै भन्दा ठूलो बायाँ tributaries)।
- चिया, Aldan, Vitim, भाव, Kirenga, Olekma (सबै भन्दा ठूलो सही tributaries)।
तिनीहरूलाई को सबै भन्दा ठूलो छ नदी Aldan एम 729 000 वर्ग को पूल क्षेत्र बाट।
- दायाँ: Suhusha, Orlinga, बीच, Zharkov, Chichapta, IGA, Dyanshka, Tayura, Dzhardzhan, Kovtorov, Botovka, Anga, Tutura, ठूलो नदी, distilling, Shapkin Buotmama, Berezovka, लघु Balakhnev, Yukte, लार्च, Chechuy, माथिल्लो Sarafaniha, Tuolba, दलदली भूमि, Kovtorov, Kuzmin, Elovetsky, Sobolokh-Mayan, Parshinka, Zakobeninskaya नदी र अरूलाई;
- बायाँ: सिन्धुघाटीका, Yamny, Ilga, तल्लो, Atalanga, Markha, चन्द्रमाहरू, Zaharovka, ड्राई, माथिल्लो Bochakta, Shulaga, Turuk, स्केट, Naman, Semiga, Bobrovka, Kazimirka, Bots, Fedorovka, Ilikta, Talabak, Kuchta, Fedorovka, आधा, Potapovka, Kokar, slain गर्न, Peleduy, Horuonka, Eekit, Tympylykan, भालु, Pilyuda, Rassokha, Yamny, माथिल्लो Katyma, Moksheniha, Meneevsky, तल्लो Katyma, Olenek, Chembalovka, भालु, Nemtanka, Ichera, Zaharovka, Stepaniha, Kulenga र अरूलाई।
Lena नदी 4,400 मी छ। अधिकतम गहिराई - 21 कि। को armhole अधिकतम चौडाई - 30 कि। को स्विमिंग पूल क्षेत्र 2.490.000 मी ² छ। शक्ति लीना र यसको tributaries लगभग सबै पग्लियो हिउँ र rainwater द्वारा बाहिर छ। कारण permafrost जलाशय गर्न गरिबी भूमिगत द्वारा खुवाउनुभयो, तथापि, geothermal स्रोतहरू को अपवाद संग। नदी को वसन्त त्यहाँ एक बाढी, बाढी को गर्मी र शरद ऋतु र हिउँदमा बढी कम कम पानी अवधि द्वारा विशेषता छन् हुन्छ छ।
स्थान वर्णन र माटो
जलाशय माथिल्लो पुग्छ, र यसको सही tributaries को एक महत्वपूर्ण भाग भएको Baikal क्षेत्र, Aldan पठार र ट्रांस-Baikal को पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छ। पूल को बायाँ-बैंक भाग मा छ केन्द्रीय साइबेरियन पठार। नदी को सबै भन्दा कम खण्ड बीचमा छ र (केन्द्रीय Yakut सादा) को समयमा यो कम। Pokrovsk, Yakutia मा स्थित छ जो शहर पछि, लीना नदी प्रवाह एक क्रल गर्न slows।
नदी तीन आधारभूत क्षेत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ: ताल देखि 12 कि Batamay (मध्य) मा बाट confluence गर्न अन्तिम एक नदी Vitim (माथिल्लो भाग) मा confluence सम्म, 1470 मीटर को एक उचाइ मा स्थित छ जो, स्रोत, देखि भने मुख इंगित (तल)।
माथिल्लो मा नदी को भाग यसको लम्बाइ लगभग तेस्रो लागि खाताहरू। बेसी को चौडाई च्यानल 200 मिटरसम्मको Narrows केही ठाउँमा देखि 1-3 मी 10 मी दायरा। को ढलान ठाडो र चट्टानी तालाब छन्। क्षेत्र मा लीना नदी को उचाइ 300 मिटर पुग्यो।
बीचमा यो थप समृद्ध बन्दछ पुग्छ। यसको आकार विशेष नदी Olekma संग confluence पछि वृद्धि गरिएको छ। यहाँ, च्यानल चौडाई2मी छ। मुख तल Olekma Dolina Leny जो पृथक चट्टानहरु छन् चूना कडा dissected ढलान संग साँघुरो हुन्छ।
को Aldan नदी लीना सीमाहरु को मुख तल केन्द्रीय Yakut सादा परे विस्तार गर्नुहोस्। यस क्षेत्रमा, आफ्नो घाटी 20-25 मी गर्न widens र armhole चौडाई - 7-15 कि। को ponds को बेड धेरै ramified छ। उपत्यका एकदम अमिल्दो: बाँया बैंक मा लीना नदी ढलान दाँया मा भन्दा धेरै कम छ। क्षेत्र 16-20 मीटर को एक गहिराई पुग्छ। जलाशय पूल तल्लो पुग्छ मा संकीर्ण छ: पश्चिम मा त्यहाँ upland छन् मध्य साइबेरियन पठार र पूर्व मा Verkhoyansk सीमा को भारी इष्ट spurs। यसबाहेक, एक नदी को रिज र Czekanowski Kharaulakh पहाड बीच बग्छ जहाँ एक क्षेत्र मा, च्यानल चौडाई2मी गर्न संकुचित छ।
जहाँ तालाब को Laptev सागर मा बग्छ एक ठाउँमा, जो सबै भन्दा ठूलो नाइल डेल्टा (30 000 मी वर्ग। एम) भन्दा बढी नाघ्यो एक विशाल धेरै शाखा संग (नक्सामा लीना नदी बेसिन हेर्दा यो देख्न सकिन्छ) डेल्टा, गठन। त्यहाँ महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्रहरु छन्: "। लीना-मुख" पार्क फाल्कन र Ust-लीना, साथै आरक्षित यी ठाउँमा, त्यहाँ चरा को बारेमा 109 प्रजाति, माछा को 32 प्रजाति, 33 स्तनधारी र बिरुवाहरु को 402 प्रजाति छन्।
Lena एक शक्तिशाली बरफ शासन अन्य नदीहरू देखि एकदम फरक छ। एक एकदम बलियो र बाक्लो गिट्टी बरफ कटु, लामो जाडो महिनामा र साना हिउँ मा तालाब मा गठन गरिएको छ। यो बिना नदी दक्षिण मा लगभग 5-6 महिना र उत्तर मा 4-5 महिना धारण। यसलाई स्थिर-अप जलाशय को tributaries भन्दा 10 दिन पछि लागि सेट गरिएको छ। को लीना नदी माथिल्लो पुग्छ अक्टोबर को अन्त मा स्थिर छ, र तल - सेप्टेम्बर को अन्त देखि। पूर्ण माथिल्लो र केवल गर्मी को सुरुमा मिड-मई मा तालाब Thaw - तल्लो पुग्छ मा। अधिकतम पानी तापमान को अपस्ट्रिम मा 19 सी र बारेमा 14 सी पुग्न सक्दैन - तल मा।
लेट अप्रिल मा, वसन्त बाढी अक्सर Kirensk (को लीना को माथिल्लो भाग) को शहर नजिकै अवलोकन र बिस्तारै एक पनि बरफ छोपेको तालाब त्यहाँ आउँछ जहाँ उत्तर, गर्न सारे। नदी घटना तल्लो पुग्छ मा सामान्यतया मिड-जुन अवलोकन छ। यहाँ, पानी को वृद्धि 18 मीटर सम्म पुग्न सक्दैन। सालाना Laptev लीना टन solutes बारेमा 41 हजार बनाउँछ।।
जलाशय लागि पनि पानी मा तलछट को ठूलो मात्रा को फलस्वरूप हुन्छ जो एक आवधिक वार्षिक अपवाह मा, वृद्धि द्वारा विशेषता छ, तर किनभने लीना को तल permafrost र बरफ को तीव्र पग्लिने छ। यो घटना Yakutia तापमान को उत्तर मा उच्च सामान्य भन्दा हाल छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए छ।
नदी मा सबै भन्दा ठूलो बस्तियों Kachug, Ust-Ilga, Vitim Verkholensk, Sangar, याकुत्स्क, सर्वश्रेष्ठ, Maimaga, भाव, Chekurovka, Omolo, Bakhanay, horintsy, Sinskaya र अरूलाई मानिन्छ।
प्रमुख बंदरगाह: Lensk, Sangar, Pokrovsky, Tiksi, sturgeon, Kirensk, Olekminsk र याकुत्स्क।
क्षेत्र को सबै भन्दा प्रमुख शहर याकुत्स्क गर्न मानिन्छ। यो पोखरी को सही पक्षमा Cossacks पत्रुस Beketov को 1632 detachment मा स्थापित भएको थियो। पछि यो लीना नदी बायाँ बैंक सारिएको थियो। अब यसको जनसंख्या लगभग 2,40,000 बासिन्दाहरू छ। यो उत्तर-पूर्वी साइबेरिया को सबै भन्दा ठूलो बस्तियों छ।
सामान्य मा, गरिबी नदी तट आबादी। अन्य समयमा एक गाउँ देखि दूरी अप किलोमिटर सयौं हुन सक्छ। को बस्तियों सबैभन्दा याकुत्स्क नजिकै अवस्थित छ। धेरै गाउँमा एक derelict अवस्थामा छन्।
इलाका धेरै taiga र विशाल पाइन वन ढाकिएको छ। यस क्षेत्रमा Cedars, स्प्रूस, मेपल, FIR र पाइन बढ्दै छन्। तर, केही क्षेत्रमा त्यहाँ त्यहाँ वनस्पति (उदाहरण Mugwort, fescue) steppe तट लीना Meadow छन्।
Lena नदी बेसिन को प्रजाति मा धनी छ व्हाइटफिश,: माछा Pike, IDE, सन, Catfish, tungun, व्हाइटफिश, dace, eel, ट्राउट, grayling, सिस्को, Ruff, अड्डा, आक्षेप, मछली र ब्रीम।
पशुहरू बीचमा यहाँ ermine, मिंक, ब्वाँसो, भालु, लाइभ Caribou, Marten। नरम र फ्लफी फर जन्तुहरूसित एकदम सजिलै कठोर जाडो महिनामा सहन मदत गर्छ। चरा क्षेत्र - Tit Tundra र नृत्य, टुन्ड्रा हंस र गुलाबी सामुन्द्रिक चरो ट्याप गर्नुहोस् - पनि न्यानो बाक्लो पक्षति छ।
नदी त्यहाँ G अधिक 50-60 भन्दा / m³ एक तुवाँलो छ। जलाशय को खनिज को हदसम्म - ताजा देखि नुन गर्न। सामान्य मा लीना मध्यम र कम लवणता द्वारा विशेषता। औसत बाढी र बाढी समयमा अवलोकन। हामी रासायनिक संरचना कुरा छ भने, पानी हाइड्रो-कार्रोप्नेट-क्याल्सियम गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ।
Lena Yakutia को मुख्य waterway र इर्कुत्स्क क्षेत्र मानिन्छ छ। नदी Kachuga आफ्नो मुखबाट navigable छ। को लीना मा Ust-Kut को गाउँमा मात्र खोक्रो मस्यौदा संग जहाजहरु पौडी खेल्न सक्छ। उपायहरूको सानो जायदाद मा सालाना जलाशय तल बढाउन गर्न। नेभिगेसन अवधि बारेमा 125 गर्न 170 दिन देखि रहन्छ। यो "उत्तरी वितरण" को एक महत्वपूर्ण भाग बनेको पानी यो शरीर मा छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
नदी क्रूज जहाज र साना डुङ्गा तल फ्लोट। Lena - पर्यटकहरु र स्थानीय दुवै बीच माछा मार्ने लागि एक लोकप्रिय ठाउँ।
Lena नदी बेसिन तथाकथित Shishkin चट्टानको लागि प्रसिद्ध छ। यो धेरै राम्रो तरिकाले प्राचीन मानिसहरू को रक चित्रहरु संरक्षित गरिएको छ। तिनीहरूले जलाशय माथिल्लो पुग्छ छन्। यो त झन्झन् र स्पष्ट आदिम मानिसको काम प्रस्तुत जहाँ मात्र स्थान हो कि टिप्पण लायक छ
पर्यटकहरु बीच उत्तिकै लोकप्रिय लीना खम्बा (Yakutia Khangalassky जिल्ला) - एक अद्वितीय जियोलोजिकल गठन - र प्रकृति आरक्षित, नदी को सही बैंक मा स्थित छ जो। को रेपिड को एक "शैतानको लेन" भनिन्छ, र चट्टान भनिन्छ "मादक पदार्थ सेवन साँढेको।" पुरातन मान्छे को लीना खम्बा निशान को क्षेत्र मा पनि, पाइएको छ। यो वास्तवमा extratropical मानिसको मूल बारेमा सिद्धान्त पुष्टि गर्छ। वैज्ञानिकहरूले एक फरक मिति Neolithic साइटहरु को उमेर छ हुनत, यो जीनस होमो सदस्यहरू कम्तीमा 3,00,000 वर्ष पहिले लागि यहाँ बस्ने कि ज्ञात छ।
बस अभूतपूर्व - साइबेरिया, चमत्कार साँच्चै धेरै, तर taiga मा मरुभूमिमा। नदी को सही बैंक मा स्यान्डड्युन, एक सुखा र तातो भू-भाग को भ्रम सिर्जना जो एउटा सानो क्षेत्र (लगभग 1 मी) छ। यो आत्म-छलछाम मात्र आसन्न पाइन नष्ट। यो घटना को विवरण, त्यहाँ तिनीहरूलाई को एक आधिकारिक अपनाए छैन हुनत गरिएको छैन, धेरै छन्।
खनिज र ऊर्जा क्षमता
Lena 12 reservoirs, सबै भन्दा ठूलो जलविद्युत शक्ति स्टेशन दुई Vilyue र Mamakane छन् सिर्जना गरियो। को बेसिन यसको खनिज लागि प्रसिद्ध छ। यहाँ Aldan र Bodaibo सुन-असर क्षेत्रमा छन्। को लीना को बेसिन मा सुन जम्मा प्रारम्भिक 19 औं सताब्दी मा फेला परेन। राम्रो चाँडै रूस मार्फत बह क्षेत्र को अविश्वसनीय धन को प्रसिद्धि कि पछि। क्षेत्र अलास्का मा एक वास्तविक सुन भीड सुरु भएको छ। कोस्ट सजिलो पैसा धेरै प्रशंसक कब्जा गर्न थाले। व्यापारीहरू, कारीगरों, फरार अपराधी, सैनिकहरु: तिनीहरूलाई बीच जनसंख्याको फरक खण्डहरूमा प्रतिनिधिको थिए। धन को पछि लाग्नुलाई तिनीहरूलाई धेरै भोक र रोग बाट मृत्यु छ, तर सुन खोज्नेहरूको अझै पनि मात्र थप र थप भयो।
Viluy नदी पनि 1955 मा पत्ता थियो हीरा निक्षेप, राख्नुभयो। पहिले, यो यी पत्थर मात्र ट्रपिकल देशहरूमा पाइएका विश्वास थियो। अब रूस को हीरा राजधानी Mirny को सबै भन्दा ठूलो शहर मानिन्छ छ। साथै, त्यहाँ यस्तो कोइला, प्राकृतिक ग्याँस, अभ्रक, रक नुन, रूपमा स्रोतहरू छन् फलाम अयस्क र अन्य।
आफ्नै यस पहिलो नजर मा कठोर र inhospitable किनारा सुन्दर र आकर्षक। यसलाई आफ्नो स्पष्ट inaccessibility, पानी, र लीना को तट बावजुद, बाहिर गरिएका रूपमा धन धेरै समावेश गर्दछ। यो नदी बेसिन अझै पूर्णतया बुझ्ने गरिन्छ देखि यी क्षेत्रमा, धेरै सम्पत्तिहरू देखाउने सम्भव छ।
एक शैवाल को मुख्य विशेषताहरु। सुविधा र शैवाल को महत्त्व
के उपन्यास "हाम्रो समय एक हिरो" मा मरियमलाई Pechorin गर्छ
रातो कावीयार को प्रकार - तिनीहरूलाई कसरी प्रत्येक अन्य देखि भेद गर्न? कसरी चयन र स्टोरमा?
"Noksprey": प्रयोग, संरचना लागि निर्देशन, तयारीको र समीक्षा विवरण
एक जीवन मा पुस्तकको भूमिका
कोरियाली निगालो: को प्रयोग
को "खोज रक्षा", र कसरी यो व्यवहार के छ?
छत लागि वाष्प बाधा। मूल्य, सामाग्री, स्थापना
अवैतनिक खगोलविदहरु लागि टेलिस्कोप: कसरी चयन गर्ने? हामी आकाश हेर्न